SomaliTalk.com » 2011 » December » 19
Home » Archive Maalinta December 19th, 2011
Waa dawradii 6aad oo ka dhacaysa wadanka Danmark magalada.Aarhus
Waxaa lagu wargalinayaa dhamaan umada Soomaliyeed ee ku nool wadanka Danmark gaar ahaan magaalada Aarhus inay ka dhicidoonto MASJIDKA Al-TAQWAA(Åbyhųj)ee magaalada Aarhus-Danmark dawradii 6aad ee sharciga ahayd. Waxaa ka qayb qaadadan doona muxaadaradka iyo kalimaadka culimo iyo ducaad ka kala imaanaya wadanka Danmarka gudihiisa. Dawrada hal ku dhageedu waa“GUNTA SARE GAAR AMA U DHAWOOW“ Maalmaha...
Madaxweynaha DFKMG Shiikh Shariif Iyo Wafdi uu Hoggaaminayo oo u Ambabaxay Magaaladda Garoowe
Madaxweynaha Dawladda Federaalka KMG Soomaaliya iyo xubno uu hoggaaminayo ayaa barqanimadii maanta ka dhoofay Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ee Magaalada Muqdisho iyagoona ku sii jeeda Magaalada Garoowe ee Magaala Madaxda PuntLand. Garoonka Diyaaradaha Magaalada Garoowe iyo guud ahaanba Magaalada Garoowe ayaa waxaa xiligan ka soconaya diyaar garow ballaaran oo loogu diyaar garoobayo soo dhaweynta Wafdiga...
Ra’iisul Wasaaraha DFKMG Oo La Filayo Inuu Maanta Kulan Xasaasi ah Magaalada Nairobi Kula Yeesho Saraakiil Maraykan ah.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka KMG Soomaaliya iyo wafddi uu hoggaaminayo ayaa shalay gaaray Magaalada Nayroobi ee dalka Kiinya ayaa la filayaa in Maanta ay halkaa kula kulmaan Saraakiil ka tirsan Dalka Maraykanka. Wafdiga Ra’iisul wasaaraha DKMG oo ay ka mid yihiin Wasiirka Difaaca ee Xukuumadda Federaalka Somaliya iyo Taliyaha Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa sida la sheegay waxa...
SAM-SAM – BIYIHII BARAKEYSANAA
Sam-sam waa biyo kamid ah biyaha dhulka laga helo. Laakiin waxay kaga duwan yihiin biyaha kale, waa biyo barakeysan. Degaanka uu ku yaal balliga laga cabo biyahan, waa bartamaha magaalada xurmeysan ee Maka. Wuxuu kacbada u jiraa masaafo dhan 20 m. Waxaa balligaas ka soo burqanaya biyo nadiif ah, saafi ah, dahiran, leyskuna dahiro. Sida la hubo taariikhda cimriga balligu wuxuu ku mataanan yahay taariikhda...